Archive du 20190801
Fianakaviana Ravalomanana Ananan-dRajoelina kakay manokana ?
Nanomboka tamin’ny taona 2009 hatramin’izao dia mitohy ny lonilonin’ny Filoha ankehitriny Andry Rajoelina amin’i Marc Ravalomanana.
Antoko Vahoaka Miray Famitaham-bahoaka no nataon’ireo efa depiote niverina minisitra
Maninona raha tsy mamita-bahoaka ireo depiote lany tamin’ny alalan’ny IRD, nefa niverina nandray ny toeran’ny minisitra nanendrena azy ireo indray ?
Fanemorana ny fifidianana Ben’ny tanàna Tena fandikan-dalàna, hoy ny Kmf/Cnoe
Fandikana ny lalàmpanorenana ny fanemorana ny fifidiana Ben’ny tanàna amin’ny taona ho avy, hoy ny teo anivon’ny vovonana
Raharaha Mbola Rajaonah “Sahy ilay nitsara azy !”
Afaka madiodio izany aloha, hoy ny mpahay lalàna Willy Razafinjatovo na Maitre Olala, ilay mpandraharaha Mbola Rajaonah tamin’ny resaka taratasim-bola tsy nisy anto-bola na “checque sans provision”.
Fanalalahana ny fiarahan’ny mitovy fananahana Kotrehina mafy hampidirina ho lalàna indray…
Tsy azo ekena eto Madagasikara na oviana na oviana ny lalàna manaiky ny fanambadian'ny olona mitovy taovam-pananahana,
Toliara Hananganana fotodrafitrasam-panatanjahantena Goavana
Tonga nitsidika ny toerana hananganana ilay fotodrafitrasam-panatanjahantena lehibe ao Toliara, omaly alarobia 31 jolay 2019, ny minisitry ny tanora sy ny fanatanjahantena,Atoa Tinoka Roberto.
Volley Asief Analamanga Hiditra amin’ny andro faha-7 amin’ny faran’ny herinandro izao
Hiditra amin’ny andro faha-7 amin’ny faran’ny herinandro izao ny fifaninanana Volley-ball fiadiana ny ho tompondakan’Analamanga 2019.
Edito Mila mianatra
Kolontsainan’ny vola, ny seho ivelany, ny fifanindriana, ny fifaninanana ary miitatra any amin’ny fifanambakàna sy fifamonoana mihitsy aza.
Famahana ny olan’ny Seces Asa indray izay hataon’ny minisitra vaovao
Horaisin’ny minisitry ny fampianarana ambony vaovao, Blanche Nirina Richard, anio ny avy eo anivon’ny sendikan’ny mpampianatra mpikaroka eto
Sina Nampiato ny fitsangantsanganana mankany Taiwan
Namoaka fanambarana ny firenena Sinoa omaly, milaza fa haato ny fandefasana mpizahatany sinoa hitsidika an’i Taiwan.
Tanàna vaovao ao Soaniedanana Nojeren’ny fanjakana fotsiny hatramin’izay
Nivoaka tamin’ny fahanginany omaly ny filoha nasionalin’ny HAFARI Malagasy Rafanomezantsoa Jean Nirina manoloana ilay
Savorovoro eny amin’ny AFT Andavamamba Nanomboka ny fifampiresahana
Niroso tamin’ny fifampiresahana ireo mpampiasa sy ny mpampianatra eo anivon’ny Alliance française Andavamamba eto Antananarivo na AFT omaly hariva,